अब पनि विकास (डेभ्लेप्मेन्ट्) को प्रतिमान नै गलत चलिरहेको छ भन्ने बोध नहुने ? - Suvham News
अब पनि विकास (डेभ्लेप्मेन्ट्) को प्रतिमान नै गलत चलिरहेको छ भन्ने बोध नहुने ?
July 16, 2017 by gsmktm
केहि दिन अघि
ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी विनिता फुयाल
काठमाडौँ जिल्ला, तारकेश्वर नगरपालिका, नेपालटारमा बर्खाको भलले बगाएर ढलमा परी एक बालिकाको मृत्यु भएको एवं काठमाडौँ महानगरपालिका, सामाखुशीमा बर्खाको भलले बगाएर अर्की बालिकाको झण्डै मृत्यु हुन लागेको जस्ता घटना हृदयविदारक छन् ।
हाम्रा सडक, ढल तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणमा भएको कमजोरी, लापर्बाही, भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्न उक्त दुःखद् घटनाहरु प्र्याप्त छैनन् र ? शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, सडक विभाग, महानगर तथा नगरका सचिवहरु, हाकिमहरु, इन्जिनियरहरु, ठेक्दारहरु कसैले पनि दोष बोक्नु नपर्ने ? उनीहरुलाई दण्ड सजायँ नहुने ? हिजो फलानो मन्त्रालयको सचिव भएको थिएँ, मन्त्री भएको थिएँ, राष्ट्रसेवक थिएँ भनेर हिँड्ने अपराधीहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहने ? दण्डहीनतालाई मलजल गरिरहने ? अब पनि विकास (डेभ्लेप्मेन्ट्) को प्रतिमान नै गलत चलिरहेको छ भन्ने बोध नहुने ? विकास को मौलिक रैथाने प्रतिमानलाई स्थापित नगर्ने ?
Prevसाउने सोमबार,पशुपति र इतिहास
Nextमेरा बा देख्दैनन सपना महलहरु को, किनकी उहाँको चिर निन्द्रा राडिमा छ।